Illustrator Draw and Capture CC no fampiharana vaovao roa avy amin'ny Adobe | Androidsis
Adobe dia mamoaka Illustrator Draw and Capture CC amin'ny Android
Talohan'ny nahatongavan'ny fahavaratra farany dia nanana fotoana nametrahana izahay fampiharana vaovao efatra avy amin'ny Adobe amin'ny Android-nay. Raha misy dikany io dia satria ny maha-zava-dehibe an'ity orinasa ity ho an'ny inona ny famolavolana sy ny famoronana amin'ny alàlan'ireo programa isan-karazany fantatry ny rehetra toy ny Photoshop, Illustrator ary maro hafa, izay resahina manerantany.
Nanam-potoana hanavao ny Lightroom amin'ny Android koa izahay mankany amin'ny kinova 2.1 miaraka amin'ny vaovao somary mahaliana, ho an'ny inona ankehitriny amin'ny fahatongavan'ireo rindranasa vaovao roa hitondra kalitao bebe kokoa amin'ny famolavolana sy ny fahaiza-mamorona avy amin'ny finday iray eo ambanin'ity Google OS ity. Ireto ny Illustrator Draw and Capture CC ary tonga any izy ireo manolo fampiharana taloha sasany hanolotra fiasa misimisy kokoa ary hamerina handefa azy ireo mba hahafahan'ny mpampiasa maro hametraka azy ireo.
1 Sambory ny CC
2 Mpanao sary
Sambory ny CC
Capture CC no fampiharana miadidy soloo ny telo taloha Fampiharana Adobe toy ny Color CC, Brush CC ary Shape CC, izay vao navoaka tamin'ny fiandohan'ity taona ity.
Ity fampiharana vaovao ity dia afaka manaova sarisary vector ary manondrana azy ireo amin'ny alàlan'ny kaonty Creative Cloud, ary inona no borosy vaovao ho an'ny Adobe Illustrator sy Photoshop. Azonao atao ihany koa ny mamorona drafi-doko ho an'ireo sary tadiavinao ary, raha fintinina dia mitovy amin'ny zavatra natolotr'ireo fampiharana telo ireo ho an'ny mpampiasa, fa amin'ity indray mitoraka ity ihany amin'ny azy manokana sy mahaleo tena.
Noho izany amin'ny fampiharana ity dia azonao atao miditra borosy na sivana izay azo ampiasaina amin'ny After Effects CC, Illustrator CC, Illustrator Draw, In Design CC, Photoshop CC, Muse CC na Premier Pro CC.
Manomeza hevitra momba ny kaonty Creative Cloud mila famandrihana isam-bolana ho toy ny fandoavam-bola amin'ny alàlan'ny safidy rehetra fampifanarahana amin'ny alàlan'ny fitaovana samihafa sy ny programa mety napetraka tao amin'ny solosainay.
Illustrator no programa famolavolana mifototra amin'ny sary sary ary ny fandalovany amin'ny alàlan'ny fitaovana finday dia novaina ho Illustrator Draw miaraka amin'ireo fiasa mihena satria tsy azo atao izany.
Afaka miditra hatramin'ny karazana borosy dimy samihafa ary zahao hatramin'ny 64x ho an'ny antsipiriany tsara indrindra. Amin'ny alàlan'ity fampiharana ity dia afaka mandefa rakitra teratany mora foana ianao amin'ny Illustrator CC na rakitra PNG mankany amin'ny Photoshop CC. Raha vao mifandray amin'ny birao ianao dia mikarakara ny fisafidianana sy manokatra ny sehatra marina ho an'ny fisie ilay app, mba hitohizan'ny asa milamina.
Mihaona ireo fampiharana roa maimaim-poana avy amin'ny Play Store, ary tsy mila milaza akory aho hoe ny famandrihana Creative Cloud isam-bolana dia tsy maintsy araraotina mba hanararaotana tanteraka ireo rindranasa roa ireo izay tonga ao amin'ny Play Store anio hanohizana ny fampiroboroboana ny fanehoana zavakanto sy ny fizotran'ny famoronana avy amin'ny fitaovana finday arak'izay azonao atao . ho smartphone na tablette Android.
Adobe Capture: Fitaovana ny Ps, Ay
Adobe drawator draw
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Adobe dia mamoaka Illustrator Draw and Capture CC amin'ny Android
Google dia afaka nitondra ny fampiharana azy tany amin'ny Windows 10 ihany tamin'ny farany
Android 6.0 tonga amin'ny Nexus 5, 6, 7, 9 ary ny Player amin'ny alàlan'ny sary OTA sy ny ozinina